Indlu enamagumbi okulala ama-2 enendawo yomlilo - I-Airbnb
Indlu enamagumbi okulala ama-2 enendawo yomlilo
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguKaterina
Ikhaya elinamagumbi okulala ama-2 emveli elinendawo yomlilo kwilali entle yaseManna emazantsi entaba iZiria. Imi kumda wehlathi lemithi yefir kunye neyompayina emnyama kumphakamo oyi-900m, eli khaya liphangaleleyo nelitofotofo yeyona ndawo ifanelekileyo yokubalekela izibini, iintsapho kunye nabahlobo. Relax kwaye wonwabele iimbono ezintle ngokuthuthuzela - okanye ujonge iindlela zehlathi, khwela ihashe kwaye uthathe imbonakalo, umoya ococekileyo kunye namanzi alo mmandla mhle kunye nembali yaseKorinte.
Eli khaya lemveli, leentaba zamaGrike libonisa indawo evulekileyo evulekileyo yokuhlala, indawo yokutyela kunye nekhitshi evulekela kwiveranda egqunyiweyo enombono omangalisayo weentaba ezijikelezileyo kunye nentlambo engezantsi. Iithayile ze-terracotta zendabuko, iisilingi zokhuni kunye neefestile kunye nendawo yomlilo yenza ukuba kufudumale kwaye kwamkeleke, ngelixa i-woodpile egcinwe kakuhle iqinisekisa ukuba iindwendwe ziya kuhlala zifudumala kwaye zihlanjululwe nakwiinyanga zasebusika.
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo liyafumaneka ukuze kuphekwe izidlo zakho ozithandayo, kwaye indlu inegumbi langoku, lokuhlambela eligcweleyo elinebhafu/ishawari. Indawo yokulala inamagumbi amabini okulala, elinye linebhedi enkulu yendlovukazi kunye nebhedi esongwayo. Ibhedi eyongezelelweyo yesofa kwigumbi lokuhlala yenza ukuba iindwendwe ezi-5 zihlaliswe ngokukhululekileyo kwipropati. Ininzi yeesofa kunye nezihlalo ze-armchairs, kunye nendawo yokusebenzela efanelekileyo kwi-laptop, yenza ukuba ibe yinto ekhululekile kwaye iyasebenza, ngelixa impahla yendabuko kunye neenkcukacha zokuhombisa zibonelela ngamava ayinyaniso aseGrisi entabeni!
Imana yilali yamaGrike yasentabeni. Izindlu zayo ezifulelwe ngophahla zilele kwindawo entle, zidibene kwincam yehlathi lemithi yompayini neyompayina emnyama emazantsi eNtaba iZiria. Indawo yokutyela ye-barbeque eyedwa (Mouries) kukuhamba nje imizuzu emi-5 ukusuka endlwini, njengoko iyindawo yekhefi kuphela (iBouras) kwindawo encinci yelali, kwaye zombini zithandwa ngabantu basekhaya kunye neendwendwe ngokufanayo. Ukufumana izibonelelo ezingakumbi zelizwe lonke, ilali ekufutshane yaseTrikala ikumgama oziikhilomitha ezili-11 kuphela (imizuzu engama-30 yokuqhuba) kwaye yindawo ethandwayo yabakhenkethi ngenxa yokusetwa kwayo kumathambeka e-Mt Kyllini kunye kufutshane ne-Athene.
Nangona le ndlu ikwilali yeentaba, eGrisi awukho kude nonxweme. Olunye unxweme olusemagqabini lunokufunyanwa ecaleni konxweme olusemazantsi eGulf of Corinth, umgama omalunga ne-20km kwaye nje ukuba ubethe indlela eselunxwemeni uya kuphangwa! Olu nxweme lunomtsalane luphahlwe ziintaba nemiwonyo eyoyikekayo. Isiphelo sayo saseMpuma siphelela kwiCanal yaseKorinte, eyahlula iPeloponnese ukusuka kwilizwe laseGrisi kwaye kufanelekile ukutyelelwa.
Zive ukhululekile ukundithumelela umyalezo ukuba ufuna naluphi na uncedo ngexesha lokuhlala kwakho.
Inombolo yomthetho: 00000555391
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Panariti